Metal mpempe akwụkwọ Embossing Machine
Waya & Ngwa igwe
Nzuzo akpọrepu Ribbing Machine
Mbupu Ozi - AKW –KWỌ AKWUTKWỌ AKW CKWỌ AKW .KWỌ
site ha na 2021-06-02
SHANGHAI COREWIRE ụlọ ọrụ CO., LTD, na ụghalaahịa CORENTRANS®, dị ka a ọkachamara soplaya nke ígwè nhazi akụrụngwaS na integrated ngwọta. Kemgbe ọ malitere na 2010, CORENTRANS® etinyela aka n'inye nnukwu igwe igwe & ihe ngwakọta agbakwunyere. Ọrụ ...
Ọnụahịa nchara China na-arịwanye elu n'ihe ndekọ akụrụngwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-akpụ ọla kọpa 100 nke China gbanwere ọnụahịa ha elu na Mọnde n’agbata ụgwọ ndekọ maka ihe ndị dị ka igwe igwe. Ọnụahịa igwe na-arịgo kemgbe ọnwa Febụwarị. Ọnụahịa bilitere 6.3 pasent na Eprel mgbe ọ ritere pasent 6.9 na March na 7.6 pasent na ọnwa gara aga, accor ...
Mara nke abawanye na mbupu ụgwọ
site ha na 2021-05-12
Maersk buru amụma na ọnọdụ ndị dị ka inyefe agbụ na ụkọ nke arịa n'ihi oke ọchịchọ ga-aga n'ihu ruo nkeji nke anọ nke 2021 tupu ịlaghachi na nkịtị; Evergreen Marine General Manager Xie Huiquan kwukwara na mbụ na mkpọchi ga-abụ ...
Gịnị bụ Slitting Line
site ha na 2021-04-29
Slitting Line, a na-akpọ slitting igwe ma ọ bụ longitudinal ọnwụ akara, na-eji uncoiling, slitting, recoiling ígwè na-apụta n'ime ina obosara steels. Enwere ike itinye ya iji hazie igwe igwe oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, Silicon steel coils, tinplate coils, Igwe anaghị agba nchara a ...
OZI Nyocha - AKWQKWỌ AKW /KWỌ / U-CHANNEL PURLIN MILL
Ebe ọ bụ na njem mba ụwa niile emegheghị maka oge ahụ, onye ahịa ga-enyocha ngwongwo ahụ site na ịchọta ụlọ ọrụ nyocha nke ndị ọzọ. Site na nyocha nyocha nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ka ọ bịanye aka na nyocha nyocha, hazie ...
Gịnị Bụ Waya ịbịaru Machine
site ha na 2021-04-27
Igwe na-ese waya ahụ na-eji njirimara plastik ígwè nke waya nchara, dọpụta waya nchara site na capstan ma ọ bụ cone pulley na moto mbanye na usoro nnyefe, site n'enyemaka nke ịbịaru mmanu na ịbịaru na -emepụta nrụrụ plastik iji nweta diamete achọrọ. ..
Ozi mbufe - TM76
Ọkachamara soplaya nke igwe nhazi akụrụngwa. Nyere ndị ahịa aka ịbawanye uru ma dozie nsogbu mmepụta obodo. Anyị ebupụla igwe igwe igwe na Nigeria, Turkey, Iraq, na Russian kemgbe afọ. Site na ọnụahịa igwe zuru ụwa ọnụ na-ebili, yana mmụba na njedebe na njedebe ...
site ha na 2020-12-16
SHANGHAI COREWIRE ụlọ ọrụ CO., LTD. dị na ụlọ A309, NO.7178, ZHONG CHUN ROAD, MIN HANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA. Ná mmalite nke ntọala ya, ụlọ ọrụ ahụ guzobere ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ dị mkpa na Hong Kong. Tumadi na-enye akụrụngwa akụrụngwa na ngwa, eletriki kwadebe ...
Usoro Flow nke High Frequency welded Pipe Unit
Nnukwu oge a na-agbanye ọkụ dị iche iche na-agụnye uncoiler, igwe kwụ ọtọ, igwe na-arụsi ọrụ ike, welder welder, nchekwa aka na-adị ndụ, na-akpụ igwe igwe, na-efegharị ikuku na-efegharị, igwe na-egwe ọka, igwe nyocha, na-atụgharị ala, ihe nchọpụta na-enweghị ntụpọ, baler , hi ...
The Market Prospect nke Welded Pipe Equipment Dị sara mbara
Igwe akwara welded bụ ụlọ ọrụ na-adịte aka, mba na ndị mmadụ chọrọ ụlọ ọrụ dị otú ahụ! Na usoro nke mmepe mba, ọchịchọ maka nchara na-arịwanye elu, ya mere, akụkụ nke ọkpọkọ ígwè na usoro mmepụta nke ígwè na-ebuwanye ibu. Pipe mmepụta nwere ike ...
Igwe anaghị agba nchara anwụrụ Ndinam igwe na-bụ-eji maka na-aga n'ihu akpụ usoro nke igwe anaghị agba nchara na carbon nchara profaịlụ, dị ka gburugburu, square, profaịlụ, na ọtụtụ ihe mejupụtara ọkpọkọ, nke na-emepụta site uncoiling, akpụ, argon aak ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ onuete grin .. .
Mmezi nke igwe anaghị agba nchara Pipe Ime Machine
Na mmepe nke ụlọ ọrụ, ngwa nke igwe anaghị agba nchara-igwe na-eme igwe na-agbasawanye, ma mmezi nke akụrụngwa ọ bụla dị na ya, na-emetụta oke mmepụta, yana ndụ ọrụ nke akụrụngwa. Gaa ...
China si ígwè ahịa ọgọ on recor ...
AKWKWỌ AKW --KWỌ - NT EKWU /LỌ / U-CHANNEL ...